Home Wararka Wasiir Jamal oo Ihaano iyo Aflagaaddo isugu daray MW Deni iyo Shacbiga...
Wasiir Jamal oo Ihaano iyo Aflagaaddo isugu daray MW Deni iyo Shacbiga Somaliyeed ee Puntland.
Inta badan dadka aan hadlin waxaa lagu xantaa inay laba uun mid noqdaan kuwa caqli badan oo markay hadlaan ku hadla xikamad iyo wax kheyr leh iyo kuwa sida Madaxweynaha xilka ka dhamaaday Farmajo oo kale boqonta iska toogta markey afka kala furaan, kuna sifooba maahmaahda ah “Dabbaal ama sheeg xumaa ama shib ahaa”. Jamaal Maxamed Xasan oo u arday ah Farmajo ayaa daba kacay wadadii caddeyd ee maclinkiisa Farmajo, wuxuuna ihano u geystay MW Deni oo ku caayey shakhsi weyn oo buuran oo haddana aan waxba ka qaban xelligii uu joogay wasaarada Qorsheynta Qaranka, lagana rabo inuu cudurdaar ka bixiyo wixii uu halleeyey.
Jamaal oo ka mid kooxda la yiraahdo “markii ugu horreysay” oo ay shirko ku yihiin Farmajo, Jamal iyo Kheyre ayaa sheegtay guulo waaweyn oo uu ka soo hooyey xilka wasaarada Qorsheynta. Waxaa uu tirsaday inuu isaga qabtay hawlo qiimo badan oo ay qabteen madaxdii ka horreysay wasaarada sida MW Deni iyo Wasiir Cabdiraxman Yusuf Ceynte oo wasaaradda u sal dhigay, soona saaray tirakoobka maanta dalka u yaallo oo uu ka fekersan yahay Jamaal in dib loo macmalo si tirooyinka soo baxay la isu dhaafiyo. Sida runta ah taas waxba ma badaleyso waayo haddiba dalka uu dego iyadaa tirada saxda iska soo baxaysa, waxaana heli doonnaa tarakoob meel walba oo dalka ka mid ah.
Dadka la sheeqeeyaa waxay Jamaal ku sheegeen inuu yahay ruux aan isku kalsooneyn oo ay adag tahay in lala shaqeeyo xataa marka uu shirarka kula jiro khubaro caalami ah ama madaxda hay’adaha ay shaqo wadaagta yihiin waxaa uu shirka ka baxaa dhowr jeer isagoo leh waxaa isoo wacay Madaxweynaha iwm.
Waxaa kaloo ku maqan ayaa la leeyahay Jamaal iyo xaaskiisa Hodan Cisman lacago ay ka horumarsadeen 31 Shirkadood oo badaha Xaalufiya oo ay qandaraas uga qaadaan Xasan Cali Kheyre iyo wasiir Bidhaan. Shirakadahaas laga leeyahay dalka Shinaha waxaa horay maqaalkan uga qortay Muqdisho Online.
Jamaal oo u muuqday inuu reer Puntland ku beer laxawsanayo mashaariic uu ka soo leexiyey meelo kale oo aan xataa wax raad ah lahayn iyo inuu u sed buriyey aqoonyahan aqoontiisa ku muteystay Xafiiska istaatiskada oo hadda madax ka ah inuusan xilkaas ku helin karti iyo aqoon uu dheeraa raggii kale ee uu isaga u sadburiyey taas oo keeneysa in beritana kan yimaadaa uu la iman doono mid uu rabo oo uu u sadburin doono, kanna laga qaadi doono maadaama uu garab ku yimid. Waayo Jamal ayaa ka shifay haddey run tahay inuu Meesha ugu dhiibay reer Putnladnimo ee uusan aqoon ku muteysan iyo inuu ku been abuurtay aqoonyahan ka oo uu yahay shakhsi u qalma jagadaas kana soo jeeda beel ama degaan Somaliyeed.
Jamaal waxaa uu ka mid yahay dadka dhibaatada u geystay Somaliland oo uu ka jaray dhamaan dhaqaalihii ay ay beesha Caalamka kabaka uga dhigeysay taas oo ay xaq u lahaayeen oo ay siin jirtay dowladdii ka horreysay NN, isagoo qabiil isticmaalaya, hasa yeeshee xumaanta qabiilka halkaas kuma joojinine waxay ula gudubtay puntlandka u soo dirsatay barlamanka Federaalka inuu ku kala gooyo qabiil oo uu rabo inuu ka jaro Sool iyo Sanaag Puntland inteeda kale.
Runtii waa ayaandarro in Puntland oo xildhibaan ka dhigatay si uu difaaco wadajirkeeda uu kaga faa’iideysto dulqaadka hogaankeeda maanta iyo dimoqraadiyadda in doqon waliba wuxuu rabo uu sheegi karo. Laakiin haddii uu joogi lahaa anh MW Cabdullahi Yusuf inuu Xabsi dhigi lahaa ama saacado uga soo saari lahaa Puntland ayaa lubaa.
Doqon qabiil ma leh, qaranna looma kaashan karo, sidaas darted Jamal waa qof la yaqaanno tariikhdiisa iyo ciida uu xuraamo ilaa iyo maanta isagoo wasiir ah Federaal noogu magacaaban.
Puntland waxaan kula talineynaa dib u eegaan dhallinyarada qiimaha badan ee degaankaas ka soo jeeda oo isku wadi kara Wasiir Qaran iyo xildhibaanimada golaha shacbiga oo ka wakiil ah hooyada federaalka oo ah Puntlad, meeshana ka saaraan shakhisigaan basaasnimada la daba jooga madaxda iyo aqoonyahannada Somaliyed.